Badiba dumarka Soomaalida waxa lagu dhalliilaa, in aanay milgo iyo maamuus wanaagsan
Tuesday 9th October 2018 08:28:02 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
SOO YUUCAN. W/Q: Khalid Idan Yousuf
Badiba dumarka Soomaalida waxa lagu dhalliilaa, in aanay milgo iyo maamuus wanaagsan kula dhaqmin Hooyada soddohda u ah amma hooyada ninka ay u dhaxday.Haddaba waxaan sheekadan ku soo qaadan doonaa, waxa kala qabsaday gabadh iyo soddohdeen.
Ooridani waxa ay haysay hooyadeed iyo ninka ay u dhaxday hooyadii, way kala xigtaysan jirtay iyadoo fogaynaysa soddohdeed . Marka ay cuntada siinayso waxaugu dhiibi jirtay caruurteeda , iyadoo odhan jirtay hooyo ordoo Sooyuucan cuntada u geeya. Halka ay odhan jirtay marka ay hooyadeed ugu dhiibayso hooyo ordoo Ayeeyo cuntada u geeya.
Waxay sidan arrintu ahaatoba , habeen habeenada ka mida ayay islaantii soddohda u ahayd qaaday iyadoo gaysay meel libaax joogo oo cidlo ah. Kudarsoo islaantu waa indhoole.
Markii ay meeshii gaysay ee ay iska tagtay ayuu libaaxii u yimid islaantu waxba ma arkayso waxay halkays u lahayd "hooyo waa khayr". Libaaxii ma cunin amarka Alle. Aroortii ayuu ninkii yidhi hooyo meeday markaasay tidhi "dee mooyi maanigaa arkayba, sowtii xalay qolkeeda seexatay". waxa la bilaabay in la raad-ceeyo islaantii, wax la socdaba waxa loo tagay iyadoo halkii ay dhigtay iska fadhida oo Sac dhalayna ag-joogo. Ninkii iyo ooridiisii waxay isku qabsadeen anigaa SACA leh iyo anigaa leh, markii dambeninkii ayaa qaatay maadaamoo hooyadii SACA loogu dul tagay.
Jabba waa ka dambeeyee gabadhii habeenkii dambe fiidkii ayay caraabisay hooyadeed iyadoo doonaysay inay SAC dhalay ku hesho. Nasiib se darro libaaxii ayaa galin horeba rawaxiyay. Aroortii ayay ku kalahday meeshii mise libaaxiibaa markay ka dhaqaaqdaybaislaantii diirtay.
Maxaa kaaga baxay sheekadan Akhriste!!!!
Nin baahiyay muuqaal ku saabsanaa weerarkii lagu qaaday muslimiinta New Zealand oo xukun lagu riday.
[Daawo:-] Saxafi Axmed Kaafi Oo Hadal Duur-xul Ah Ka Jeediyay Xafladii Lagu Abaal-mariyay Haldoorka Gobolka Togdheer.
Wasiirka Beeraha Somaliland Oo Booqday Mashruuc Ciida Lagu Xidhayo
[Daawo:-] Dowlada Kenya Oo Madaxweyne Farmaajo Dartii U Ciqaabaysa Soomaalida Kenya Ku Nool.